Sidee loo sudhaa muraayadda derbiga saqafka?
Dad badan ayaa ka fekeraya inay ku dhejiyaan xayawaanka muuqaalka leh hawl adag oo adag. Runtii, gacmahu si dhakhso ah ayay u daalaan waxayna u baahan yihiin xirfad, laakiin shaqadani waxay gebi ahaanba ku jirtaa awoodda martida. Waxaan qeexaynaa marxaladaha aasaasiga ah ee noocan ah ee shaqada.
Waa maxay xaashiyaha muraayadda lagu dhajiyay saqafka?
Waad sii dheeraan kartaa inaad liisto noocyada waraaqaha derbiga ah - kuwa aan duubneyn, waraaqda, jute, birta , muraayadaha , dharka. Iyaga oo la shaqeynaya ayaa leh shaybaarkooda. Waa lagula talinayaa isla markiiba, ka hor inta aanad ku daboolin koolada, si aad u barato calaamadaha ku jira baakadka. Xaqiiqdu waxay tahay in mararka qaarkood ka kooban halbeegga ayaa lagu dabaqayaa saqafka, iyo kuwa kale - si toos ah loogu damaashaado. Waxaa jira waraaqo wallac ah, oo ah shaati-mar horey u jirey. Waxaa lagu dabaqaa hab wata warshad oo dib u bilawday hantideeda marka qoyan. Calaamadeynta waxay soo bandhigeysaa macluumaadka ugu muhiimsan ee ku saabsan sida si habboon loogu dabooli karo xaanshiyaha dusha sare. Sidoo kale, waxaa jira macluumaad ku saabsan mabaadi'da xulashada qaab isku-dhafan, wuxuu qeexayaa habka looga saari karo dusha sare ee derbiga, waxay muujineysaa is-qabadkiisa iftiinka iyo adkeysiga qoyaanka.
talaabo raaxo leh;
buraashka iyo roogga si aad u dalbid sharooto;
weelka loogu talagalay xabagta;
balaastig ah "garabka" si aad uga saarto goobooyin;
Badanaa dadku waxay isticmaalaan tilmaamaha lagu soo saaray xirmada, laakiin waxaan ku darsannaa xayawaanka derbiga ah (sida Mitanol Wagon), oo lagu qasi jiray 5 litir oo biyo ah, qiyaastii 1 litir oo ah sonkorta PVA.
Dhamaan musqulaha waa in la soo saaraa, laakiin haddii ay tahay mid aan caadi ahayn oo aan ku dhaafin furitaanka iyada oo aan la demin, markaa waxaan ku dabooli doonaa filim.
Isticmaalida bare, cajalad iyo jilic jilicsan ee tuubooyinka, waxaanu diyaarineynaa kaltanka, kaas oo loo isticmaali doono lammaanaha. Meeshii kabaha xumbada waxaad isticmaali kartaa maro nadiif ah.
Go'aami furka lakabka. Waxaan cabbirnaa qiyaasta cajaladda ku jirta darbiga kuna rid 3-4 calaamad.
Cabbiraadda ballaca qolka, gooyay waraaqda derbiga, siinta dherer ah walxaha kaydka ilaa 10 cm.
Waxaan u adeegsan karnaa qalabka jilibka, iyo meelo adag oo aan gaarno waxaan la shaqeynaa burush.
Waxaan si dhakhso ah isku dayaynaa inaan ku dhajino bogga hore.
Ugu horeyn, si taxadar leh u sawir gacmahaaga, si tartiib tartiib ah u dhaqaaq dhinaca derbiga ka soo horjeeda.
Haddii xariggu uu aad u dheer yahay, ka dibna adiga oo aan wadajir la joogin joogsi joogta ah, way adkaan doontaa.
Cirifka "baal" ayaa ka soo baxa goobooyinka hawada.
Tartiib tartiib ah, isku day inaadan jeexin xayawaanka sawirka, waxan ka shaqeyneynaa dhammaan xariijinta ilaa gees ahaan.
Meelaha qaarkood, maaddada xad-dhaafku waxay gaari kartaa derbiyada dhinaca.
Ugu dambeyntii, waxaan ku xoqanaa geesaha leh aaladda, waxaanay jarjareysaa maqaarka dushiisa oo leh mindi.
Waxaad arkaysaa in su'aasha ah sida loo dhajiyo wallpaper on saqafka, dhibaatooyinka waaweyn ee waa in aan soo baxaan. Dabcan, waa inaad adigu la qabsataa shaqadaada, iyo waxa ugu wanaagsan inaad haysato qof aad u shaqeynaya oo taageero ah. Waxaan jecel nahay inaan la qabsano dhibaatooyinka oo dhan iyo inaad qurxisaan saqafkaagaaga adigoo ku qurxiya sawirka quruxda badan!
Gudaha dhismo yar yar
Ku rakibida albaabada albaabka
Laminate maqaarka hoostiisa
Meelaha fuushaan ee musqusha leh gacmahaaga
Goobta sare ee dibadda ee ubaxa
Qolalka qoryaha oo leh gadaal
Rugaha carruurta ee waddooyinka
Waraaqda derbiga ee orchid
Kuraasta loo yaqaan 'Ortopedic'
Magaca Sofia macnaheedu maxay tahay?
Eyga ugu fiican adduunka
Sidee loo doortaa baaskiilka ilmaha?
Qolka noolaanta qaabka Art Deco
Bikradu ma uur leedahay?
Kiniinnada laga bilaabo madax xanuunka waqtiga uurka
Bella Hadid wuxuu abuuri doonaa ururin si wadajir ah ula shaqeynaya qalabka 'Hearts' ee 'Chrome'
Sidee loo abaabulaa xaflad aroos?
Sidee loo kabaa kabaha nubuck?
Tareenka - isku dheelitiryada
Baahnnaanta wareegga dhiigga
Sideen u qaataa Ampicillin?
Goob-jar-jeebka carruurta loogu talagalay
Sidee loo sameeyaa smokehouse gacmahaaga?
Xumbo ka samee xumbada
Adidas Qalabka Cagaarka ah
Burooyinkeeda Birta - daaweynta dadweynaha
Sidee looga saaraa kordhinta timaha?